Ikamva lamaqhawe, umzobo weMfazwe Enkulu kwiRif War | Uncwadi lwangoku
UChufo Llórens (1931-) ufumene indawo yakhe njengomnye wabameli ababalaseleyo kwinoveli yaseSpain ngokufaneleka kwakhe. Ayothusi into yokuba iincwadi zakhe ziye zanconywa ngokuchaneka kuseto lwazo kunye nedatha ebonelelweyo. Isiphelo amaqhawe (2020), akukho ngaphandle; Kwakhona, umbhali waseCatalan ubonakalisile ukufezekiswa kwamaxwebhu anobuchule.
Yindumasi yosapho eyindumasi eyenzeka phakathi kweParis bohemian atmosphere kunye neMadrid isiko yamashumi okuqala eminyaka ka XX yekhulu leminyaka. Elo yayilixesha elaphawulwa ziimfazwe ezimbini: iMfazwe Enkulu eYurophu kunye neMfazwe yaseRif phakathi kweSpanish neMoroccans. Ukongeza koku, kwizicatshulwa zokunqumka, isenzo, uthando, umona kunye nokuthintela ukuhlangana kuyahlangana.
1 Uhlalutyo kunye nesishwankathelo seXesha lamaGorha
1.1 Ezinye zezehlo ziphathwe kwinoveli
1.3 Iindawo kunye nomzuzu wembali
1.4 Uhlobo kunye nezinto eziyinyani zembali kwiLamva lamaGorha
3.1 Ububanzi bomsebenzi wakhe
4 Iimpawu zeenoveli zembali zikaChufo Llórens
4.1 Inkuthazo, iimpembelelo kunye nemeko
4.2 Imfazwe njenge-axis enqamlezileyo
Uhlalutyo kunye nesishwankathelo se Isiphelo amaqhawe
Ezinye zezehlo ziphathwe kwinoveli
Imfazwe yeRif phakathi kweSpain neMorocco
Ukufika koololiwe bokuqala eSpain
Iifowuni zokuqala zavela kummandla waseIberia.
Abalinganiswa abaphambili nguJosé Cervera, intshisakalo eMadrid kunye noLucie Lacroze, intombi yesicakakazi saseFrance.. Kuqala, uJosé uthandana no-Nachita, intombi eyodwa yomIndiya eyathi yadlula kwikomkhulu laseSpain. Kwelakhe icala, uLucie uthabathela kuye uGerhard, umzobi oselula waseJamani onqwenela ukuba ngutitshala.
Nangona kunjalo, ukucalucalulwa koluntu kunye nezinto ezithile ezenzekayo ziyanzima igalelo ukusinda kwezi zinto zombini. Emva kwexesha, intlanganiso phakathi kukaJosé noLucie iphela kumanyano lwemvakalelo. Ke, ibali ligxile kwindlela yabantwana abathathu: UFélix Pablo noNicolás.
Isiphelo samaqhawe ...
Iindawo kunye nomzuzu wembali
Incwadana iqala ngo-1894, ixesha apho ubuqaqawuli kunye nenkolo yoohlohlesakhe baseSpain bathelekisa ubuhlwempu nobungqwabalala beeklasi ezihlelelekileyo. Oku kungalingani kwakuyintsholongwane yezobundlobongela bezentlalo kunye neengxabano ze-anarchist.
Emva kwexesha, ubomi bemihla ngemihla bamabali butshintsha kakhulu ngenxa yeMfazwe yeHlabathi yokuQala kunye neMfazwe yaseRif. Njengoko iyelenqe liyaqhubeka, abalinganiswa abaninzi badlula kwiindawo tan ezahlukeneyo njengeNtlango yeSahara, EMelilla, eLisbon, eParis naseCaracas. Ibali lifikelela incopho phakathi kwiminyaka ye-1920.
Uhlobo kunye nezinto zembali zembali kwi Isiphelo amaqhawe
Iindawo ezahlukileyo zigxininisa ukujikeleza kwecebo kunye notshintsho lwesantya. Kananjalo uninzi lwazo Iincwadi zokugxeka ezoncwadi zibonisa ukuba isiseko esibhaliweyo sale ncwadi kufanelekile ukuba sifundwe. Ukuqala kwezi ziseko zomeleleyo, uLlórens usike intsomi ekwaziyo ukudibanisa ngobuchule iziqendu zothando kunye neepaseji ezigcwele i-adventure, ukuxokozela kunye nokungaqiniseki.
Ukongeza, imizobo eneenkcukacha yokuthenga iimpahla zigqitywe ngokugqibeleleyo yincoko yababini, ngamagama aqhelekileyo ngelo xesha. Ke, ngaphezu kwentsomi yenoveli, le ncwadi ibonakala ngathi yingxelo yembali ebaliswa ngqina lokuzibonela. Ngale ndlela, umbhali waseCatalan uyakwazi ukugcina abafundi bethandabuza ngexesha lamaphepha angaphezu kwama-850 agubungela ingxelo.
Kwiiwebhusayithi zokuhlela nakwiindawo ezinikezelwe kuncwadi, Isiphelo amaqhawe ineqhayiya lamanqaku aphakathi kwe-8/10. KwiAmazon, awona manqanaba aphezulu eenkwenkwezi ezi-5 anikezelwa ngama-60% wabasebenzisi be-Intanethi; yi-7% kuphela eyinike ngaphantsi kweenkwenkwezi ezi-3 Ukongeza, abalandeli bakaChufo Llórens balatha kwesi sihloko njengowona msebenzi wakhe ugqibeleleyo ukuza kuthi ga ngoku.
UChufo Llórens wazalelwa e-Barcelona ngo-1931. Phambi kokuba azinikele ekubhaleni, wafunda umthetho, nangona uninzi lomsebenzi wakhe wobungcali wawuzinikele ekukhuthazeni nasekuveliseni imiboniso. Emva kokuthatha umhlalaphantsi, ngo-1986 waqalisa Akukho nto yenzekayo ngobusukuinkulumbuso yayo, Ukusukela ngoko uye wabalasela kuhlobo lwe inoveli yembali.
Ngo-2008, uLlórens wapapasha Ndiza kukunika umhlaba, Incwadi awayinikela kuyo phantse iminyaka emihlanu yomsebenzi phakathi kophando kunye nokubhala. Eso sihloko saba yindawo yokutshintsha kubomi bakhe bokubonga ngenxa yakhe Iikopi eziyi-150.000 vkuthengiswe kunyaka wokuqala wokukhutshwa. Uluhlu lwemisebenzi yakhe lugqityiwe ziincwadi eziboniswe ngezantsi:
Elinye iqhenqa (1993)
UCatalina, imbacu evela eSanta Benedict (2001)
I-saga yomgwebo (2003)
Ulwandle lomlilo (2011)
Umthetho welungisa (2015)
Isiphelo amaqhawe (2020).
Ububanzi bomsebenzi wakhe
Ukuza kuthi, Iincwadi zikaChufo Llórens zidlula iikopi ezizigidi ezithengisiweyo, iguqulelwe kwiilwimi ezingaphezulu kweshumi elinambini. Ezo lwimi zibandakanya: isiJamani, isiCzech, isiDanish, isiFinnish, isiTaliyane, isiDatshi, isiNorway, isiPolish, isiPhuthukezi, isiRomania, isiSerbia nesiSweden. Ngesi sizathu, igama lakhe lokubhala ligqithile kwimida yaseSpain; yaziwa kulo lonke elaseYurophu.
Iimpawu zeenoveli zembali zikaChufo Llórens
Inkuthazo, iimpembelelo kunye nemeko
Kudliwanondlebe kunye El País (2008) U-Llórens uvakalise ukuba ukukhula kolu hlobo lohlobo “kuye kwavela ngenxa yokuba intengiso iyanyanzelisa. Ukubonelela kunye nemfuno ngumlawuli omkhulu wento enomdla kwaye ayinamdla, ngalo mzuzu umnqweno wokwazi izinto ezivela kwixesha elidlulileyo uthabathela abafundi kwaye kum inoveli yezembali yindlela eya kwimpumelelo engaphezulu enje ngebhayografi okanye ezinye izihloko zeencwadi " .
Ngokukwanjalo, umbhali waseCatalan wakhomba kuAlejandro Núñez Alonso njengomnye wababhali abanempembelelo emsebenzini wakheokanye. Uninzi lwemisebenzi yakhe lubekwe kwisixeko saseBarcelona, ​​kodwa iyelenqe alinakupheleliswa kwisixeko esinye. Ngapha koko, uninzi lwamabali kaLlórens achukumisa iindawo ezahlukeneyo zaseYurophu, kwaye, ekugqibeleni, afikelela nakwamanye amazwekazi.
Imfazwe njenge-axis enqamlezileyo
Ubundlobongela ekuhlaleni kunye neengxabano ezixhobileyo yimixholo emibini rhoqo kwiinoveli zikaChufo Llórens. Kule meko iphikisanayo, kuphuhla abalinganiswa abanomdla kakhulu, iyinyani, inabantu, iqhutywa ngamabhongo abo kunye nokuzabalaza kwangaphakathi. Ewe-ayinakuba yenye incwadi ebhalwe ngumbhali weBarcelona - zonke zibhalwe kakuhle kwaye zichazwe kakuhle.
Amaxesha aphakathi eBarcelona yayisoloko ikhuthaza uLlórens kwiimpapasho zakhe zokuqala. Injalo imeko ye UCatalina, imbacu evela eSanta Benedict, Elinye iqhenqa y I-saga yomgwebo. Emva koko ungene Umthetho welungisa y Isiphelo amaqhawe Umbhali waseCatalan ujolise kwiziganeko ze-neuralgic -kwakhona e-Barcelona- ngasekupheleni kwe-XNUMX nasekuqaleni kwekhulu lama-XNUMX, ngokulandelelana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » ikamva lamagorha
Consuelo López-Zuriaga. Udliwanondlebe nomjongi wokugqibela weBhaso likaNadal
Ukukhethwa kweendaba zokuhlela ngoJuni